Imvula eGreenland: umcimbi odalwe ukuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 24/08/2021 13:08 | Ukuguquka kwesimo sezulu
Njengoba sesivele sibalulile kaningi, ukuguquka kwesimo sezulu kubangela ukuthi amazinga okushisa omhlaba anyuke athinteke kakhulu ezindaweni zezigxobo. Njalo ngonyaka izinga lokushisa liphakeme futhi lidala umonakalo omkhulu kulezo zimvelo ezisengozini enkulu. EGreenland kungokokuqala ukuthi kuqoshwe into efana nalena. Futhi kungo-Agasti 14 odlule yaqala ukuna endaweni ephakeme kakhulu yeqhwa. Lokhu kungenxa yokuthi izinga lokushisa lomoya likwazile ukuhlala ngaphezu kwamakhaza amahora ayisishiyagalolunye.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi kungani lo mcimbi wenzekile nokuthi ungaba yini umphumela wawo.
1 Lina eGreenland
2 Idayisi ngomcimbi
3 Izinguquko ezingalungiseki
Ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba kudala umonakalo omkhulu kulezo zindawo ezizwela kakhulu ekushintsheni kwezinga lokushisa. Ngokwesibonelo, indawo yezigxobo ivame ukuba sengozini enkulu ekushintsheni kwezinga lokushisa. Njengoba sibonile ezikhathini eziningi, i-Arctic Ocean iphelelwa yiqhwa. Lokhu kuthinta kakhulu izilwane ezidinga iqhwa ukuze zisinde ngoba kuyisimo sayo semvelo. Ngaphezu kwalokho, siyazi ukuthi kunokulinganisela kuwebhu yokudla izilwane ezingaphila ngakho.
Ngenxa yokukhuphuka kwamazinga okushisa, lokhu kulinganisa kuyawohloka. Kungokokuqala ukuthi into efana nale iqoshwe selokhu amazinga okushisa aqoshwa. Futhi yilokho Ngo-Agasti 14, laqala ukuna endaweni ephakeme kakhulu eqhweni laseGreenland. Lokhu kudalwe ukushisa komoya okwazi ukuhlala ngaphezu kwamakhaza amahora ayisishiyagalolunye. Lokhu kwenza kube ngokwesithathu esikhathini esingaphansi kweminyaka eyishumi ukuthi lokhu kwenzeke.
Ngamazinga okushisa angaphansi kuka-zero nangaphezulu kwamamitha ayi-3.200 wokuphakama, izimo ezisesiqongweni saseGreenland Ngokuvamile azibangeli imvula enjengamanzi kodwa iqhwa. Ngakho-ke, leli qiniso libalulekile.
Ngokwe-data evela e-United States National Ice and Snow Data Center (NSIDC), izinga lokuncibilika kweqhwa lakhuphuka ngo-Agasti 14 kumakhilomitha-skwele angama-872.000. Ngosuku olulandelayo ngemuva kwalesi sehlakalo, i-ice sheet yayivele ilahlekelwe indawo ephindwe kasikhombisa kunesilinganiso esenzeka maphakathi no-Agasti. Iminyaka engu-2012 no-2021 kuphela erekhode umcimbi ongaphezu kowodwa wocingo lwamakhilomitha-skwele angama-800.000.
Umphakathi wesayense ucwaninga kabanzi ukubona ukuthi yimiphi imiphumela engaba khona. Ngokusho komphakathi wesayensi, lokhu akusona isibonakaliso esihle se-ice sheet. Amanzi eqhweni enza ukuba ungqimba lucibilike kakhulu. Hhayi kuphela ngokufudumala nalapho kushisa, kepha amanzi amunca ukukhanya kwelanga okuningi ukuze kube mnyama. Ukuqonda lokhu kufanele sazi umqondo we-albedo. I-Albedo inani lemisebe yelanga eboniswa elangeni ezindaweni. Uma umbala wembala ulula ngokwengeziwe, imisebe yelanga izovela kakhudlwana. Kulokhu, iqhwa limhlophe qwa ngakho linenkomba ephezulu kakhulu ye-albedo. Njengoba inamanzi ngaphezulu futhi imnyama kuneqhwa, imunca ukukhanya kwelanga okwengeziwe, nakho okwandisa ukuncibilika.
Izulu eliphelele le-ice sheet lalingamathani ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisikhombisa. Abanye ososayensi abasebenza kuleyo ndawo ngokwabelana ngezithombe ngesimo sokuncibilika eqhweni laseGreenland futhi kuyakhathaza impela.
Umbiko wakamuva we-IPCC (i-United Nations Panel of Experts on Climate Change) okhishwe ngo-Agasti 9 uxwayise ngoshintsho esimweni sezulu nesimo sezulu, esivele siqalile futhi esingeke sibuyekezwe amakhulu noma izinkulungwane zeminyaka. Enye yazo ukuncibilika kweGreenland. Njengoba kunqunywe yi-ejensi, ukulahleka kweqhwa okuqhubekayo ngekhulu lama-XNUMX kucishe kuqiniseke futhi, njengoba ezinye izifundo zikuqinisekisile, kuyashesha kunokulindelekile.
Ngokuya kwesayensi yezulu, inkungu ingukukhishwa okubangelwa yimisebenzi yabantu, futhi ukuncishiswa okuphelele nokubonakalayo kokungcola kuyisidingo esikhulu, ukuze isimo sezulu sizinze futhi azikho ezinye izimo ezibucayi.
EGreenland, ama-60% okukhuphuka kwezinga lolwandle kungenxa yokuncibilika kweqhwa. Uma ukuthambekela kweqhwa kuqhubeka ngesilinganiso samanje, Ngo-2100, abantu abayizigidi ezingama-400 bazobe besengozini yezikhukhula zasogwini unyaka nonyaka.
Njengoba ukwazi ukubona, ukuguquka kwesimo sezulu sekuvele kwenza umonakalo omkhulu emhlabeni wonke. Lokhu kumane nje kuyisiqalo njengoba kuzoba nzima kakhulu ukuguqula ushintsho. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngemvula eGreenland.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Imvula eGreenland